cue- သွေးဆောင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအပေါ်အရေအတွက် meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2011) - သင့် ဦး နှောက် On Porn
cue-သွေးဆောင်အထီးလိင်စိတ်နိုးထ (2011) ရက်တွင်တစ်ဦးကအရေအတွက် Meta-analysis သည်
J ကိုလိင် Med ။ 2011 Aug;8(8):2269-75. Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2011.02322.x ။ EPub 2011 ခုနှစ်မေလ 20 ။
Kühn S က, Gallinat J ကို.
စိတ်ပညာနှင့်ပညာရေးသိပ္ပံဌာန၊ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ ဦး စီးဌာနနှင့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်ပုံရိပ်ဆိုင်ရာ Gent Institute၊ Gent တက္ကသိုလ်၊ Henri Dunantlaan, Gent, ဘယ်လ်ဂျီယံ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အမြင်အာရုံအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုသည်လူ့အပြုအမူတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဤတုန့်ပြန်မှု၏ ဦး နှောက်ကိုအခြေခံသည့် neuroimaging လေ့လာမှုများတွင်လေ့လာထားသည်။
လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကြောင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့် ဦး နှောက်ဒေသများ၏အဓိကကွန်ယက်တစ်ခု၏တည်ရှိမှုအတွက်သက်သေအထောက်အထား၏အားသာချက်ကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့သည်။
erotic အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြခြင်းနှင့်ကြားနေအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ထုတ်ယူ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှိုင်းယှဉ်ကြောင်း XNUMX ခုအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှုများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
လေ့လာမှုကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာညီလာခံအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက် activation ဖြစ်နိုင်ခြေခန့်မှန်းချက် ဦး နှောက်ကို activation ၏သြဒီနိတ်အပေါ်အရေအတွက် Meta- ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖျော်ဖြေဖို့အလုပ်ခံခဲ့ရသည်။
meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလိင်ကွဲယောက်ျားများအပေါ်လေ့လာမှုများပါဝင်သည်နှင့်လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီး hypothalamus, thalamus, amygdala, anterior cingulate gyrus (ACC), insula, fusiform gyrus, precentral gyrus, parietal cortex နှင့် occipital cortex အတွက်တသမတ်တည်း activation ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု (penile tumescence) ၏ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအမှတ်အသားနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပြီး hypothalamus၊ thalamus၊
ဤသည်မှာလိင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုပထမဆုံးအရေအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြစ်ပြီးသိမှု (parietal cortex, ACC, thalamus, insula)၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (amygdala, insula)၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (precentral gyrus, parietal cortex) နှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒတို့ပါဝင်သောအာရုံကြောကွန်ယက်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသည်။ ယောက်ျားများတွင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏အဓိကဆက်နွယ်မှုဖြစ်သော hypothalamus / thalamus, insula) အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။